Suuqgeynta riixista moobiilka wax ku ool ah
Sida laga soo xigtay 'Responsys' SVP ee Kanaallada Soo Baxaya Michael Della Penna, sanadka 2020 ayaa jiri doona 75 bilyan oo qalab ku xiran Internet of Waxyaabaha. Tani maahan dad… guryaheena, gawaarideena, barnaamijyadayada, iyo xitaa qalabkeena caafimaad dhamaantood waxay soo saarayaan codsiyo moobil iyo kaniini ah oo dhameystiran. riix ogaysiisyada.
Responsys ayaa dhawaan howlgalisay sahaminta suuq geynta mobilada ee 1,200 macaamiisha Mareykanka ah waxayna ogaadeen in boqolkiiba 68 macaamiisha soo dejistey barnaamijyada, ay awood u yeesheen ogeysiisyada riixista Macaamiisha da'da yar (18-34 sano jir), waxay ku dhowdahay boqolkiiba 80. Sida aad ku arki doontid bogga hoose, riixku waa kanaal aysan suuqyadu iska indhatiri karin.
Arrinta, sida emaylka oo kale, waxay noqon doontaa sida caqli-galiyeyaasha suuqyadu uga faa'iideystaan ​​suuqgeynta riixitaanka. Haddii ogeysiisyada riixistu aysan qiimo u lahayn isticmaalaha, way daminayaan. Waxaan dareemayaa dareen noqonaya mid caadi ah. Xaqiiqdii waan fadhiistay oo waan curyaamiyay badankood codsiyada ii soo diraya ogeysiisyada riixista… si fudud muhiim ugama ahayn in la joojiyo.
Tags: Michael Della PennaSuuqgeynta Mobilada iyo Mashiinkamarketing mobileriixriix suuq geynjawaabaha